I-WordPress: Ukuthunyelwa Okuthunyelwe Okuhlobene | Martech Zone
NgoLwesibili, Januwari 1, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Uma usebenzisa i-WordPress, elinye lama-plugins akho adingekayo kufanele kube yi Related Post Xhuma. Lokho kusho, ngibonile ukuthi ivolumu yamagama asemqoka abethunyelwa namaDaily Reads wami ibihlasela imiphumela ye-Post Post.
Futhi, ngamangala impela ukuthi i-plugin ye-Related Posts inikeze kuphela uhlu lokuthunyelwe okuhlobene ngaphambi okuthunyelwe okufundayo! Kuthiwani uma ushintsha umqondo wakho (njengoba ngivame ukwenza!)… Akufanele yini nawe unikeze okuthunyelwe okukhishwe ngemuva koqobo kodwa kusalokhu kuhlobene?
Ngenxa yalokho, ngenze ama-tweaks amancane ku-plugin. Okokuqala, ukuze ngibhekise okuthunyelwe ngaphambi nangemva kokuthunyelwe kwamanje, ngishintshe umugqa wama-91 ukusuka ku:
. "FUTHI post_date> = '$ now'" ku (KUPHAKWE: 11/15/2011):. "FUTHI upost_date! = '$ Manje'". "NOMHLA_UPHOSILE <= NGOMHLA ()"
Okwesibili, iDaily Reads kubhulogi lami ithunyelwa ngokuzenzakalela nguDel.icio.us ngaphansi koMlobi othile (ukuze ngingaze ngiguqule iphasiwedi bese ngiphula okuthunyelwe okuzenzakalelayo). Ukuze ngenze lokhu, ngivele ngeza enye ipharamitha yombuzo ukukhipha lowo mbhali kokuthunyelwe okuseshwe ngokufaka umugqa olandelayo ngemuva kwangaphambilini:
. "FUTHI uthumele_umbhali! = 4"
Ngithole inombolo yombhali ngokumane ngiyibheke kubasebenzisi bami. Ngincamela ukungenzi izinto zibe nzima ngokujoyina elinye itafula - kunganciphisa ijubane lapho le miphumela iboniswa khona futhi kwehlise isikhathi sokulayisha. Lokho kuzoholela ekutheni abantu bakhungatheke futhi bahambe.
Izinzuzo zokubonisa okuthunyelwe okuhlobene
Okuthunyelwe okuhlobene kuyithuluzi elihle kunoma iyiphi ibhulogi. Okuthunyelwe okuhambisanayo kuqinisa imiphumela yenjini yokusesha ngokukhulisa amagama angukhiye ngezixhumanisi, into ebalulekile yama-algorithms enjini yokusesha.
Okuthunyelwe okuhlobene akuyona nje i-a SEM ithuluzi, noma kunjalo. Okuthunyelwe okuhlobene kuyithuluzi lokugcina elizogcina abasebenzisi kusayithi lakho. Bangase bangakutholi abebekufuna lapho befike khona - kepha uma ubanikeza ezinye izinkomba, bangahlala bazungeze!
Tags: Linganisa i-CPmyreponookuthunyelwe okuhlobene
Ungaba Nenkinga Yewebhu 2.0 Lapho…
Jan 2, 2008 ngo-9: 23 PM
Icebo elipholile. Bengingaboni ukuthi Okuthunyelwe Okuhlobene kukhethwe kuphela okufakiwe kwebhulogi kwangaphambilini… kuzofanele ngihambe ngihlele i-plug-in. Siyabonga ngamakhanda phezulu nemiyalo 🙂
… Nonyaka omusha ojabulisayo!
Jan 3, 2008 ku-4: 39 AM
Ukugenca okuhle - yize ngokwami ​​ngisebenzisa amathegi alula wokuthunyelwe okuhlobene okususelwa kumathegi, kepha ngiyavuma ngokuphelele ukuthi okuthunyelwe okuhlobene nakho kufanele.
Jan 3, 2008 ngo-1: 05 PM
wow .. iqhinga elihle leli. Noma ngingenayo i-plug-in yokuthunyelwe okuhlobene ne-wasabi, ngine-plug-in elula yamathegi wokuthunyelwe okuhlobene futhi ngicabanga ukuthi kumele kube kusetshenziswa i- postdate <condition efanayo. Ngiyabonga ngethiphu, ake ngibheke ikhodi yami ye-plug-in bese ngibona ukuthi ngingayisebenzisa yini ukuze nginikeze imiphumela engcono.
Jan 3, 2008 ngo-7: 32 PM
Chandoo, Amathegi alula awasebenzisi isimo sangemuva - ngikholwa ukuthi kwakha okuthunyelwe okuhlobene bukhoma, ngokubukwa kwekhasi ngalinye (ngaphandle kokuthi uvule i-cache). Lokho akuyona into esebenza kahle kakhulu kwiseva, kepha kusho ukuthi izothola ukufana okuhle kakhulu, noma ngabe bekuthunyelwe ngaphambi noma ngemuva kokubukwa kokuthunyelwe.
UDoug - ngiyaxolisa ukuphuma esihlokweni kancane…
Jan 3, 2008 ngo-8: 02 PM
Akunankathazo, uStephen! Nina bantu ninelukuluku lami! Manje kufanele ngihambe ngiyohlola Amathegi Alula!
Jan 5, 2008 ku-10: 44 AM
Okuthunyelwe okuhle! Kepha ngifuna ukukhetha izakhi ezimbalwa.
Ukulungiswa kwakho kwe- “(hhayi) ukujoyina elinye itafula”Ngoba:
"kunganciphisa ijubane lapho kukhonjiswa khona le miphumela futhi kunciphise isikhathi sokulayisha"
i-offbase futhi iyisibonelo sokusebenza ngaphambi kwesikhathi esivimbela ukugcinwa, futhi kuyihlazo ukubona abantu abanezithameli eziningi bencoma izinto ezinjalo ngoba kusabalalisa ulwazi olungelona iqiniso.
Ukujoyina kwe-SQL okhuluma ngakho, ucabanga ukuthi izinkomba zakho ezinengqondo ezikhona kuzokhulisa isikhathi sakho sokuphendula okungenani ama-microsecond. Kuzofanele ube namathani namathani wethrafikhi ngaphambi kokuthi noma ngubani abone nomahluko wesigamu sesibili. Manje yebo, uma uziphoqa ungabhala ikhodi ye-SQL ye-braindead ngempela ezokwenza kabi, kepha ukujoyina okungeziwe kudatha enokhiye akusona isibonelo salokho.
Futhi, esikhundleni sokukhuthaza ukugenca i-plugin yomunye umuntu eshicilelwe, ngingathanda ukukubona ukhuthaza ukuyithuthukisa bese usebenza ukuthola ukuthi ukuthuthukiswa kwakho kufakwe kwi-plugin uqobo. Njengoba kunjalo, ungathola amanye amakhodi amateur ukusebenzisa izinguquko zakho bese kamuva uthuthukela enguqulweni entsha ye-plugin bese bezidedela izinguquko kepha bangakwazi ukuthola ukuthi konakelephi. Ushintsho lwakho lulungile, nje ukulahleka kokusebenza, kepha amanye ama-hacks angadala ukuthi isayithi liphuke uma kusetshenziswe ukubuyekezwa okuzayo kwe-plugin eyinhloko ngaphezulu kwalokhu okugqekeziwe.
I-JMTCW. Qhubeka nomsebenzi omuhle ngenye indlela. 🙂
Jan 5, 2008 ku-11: 42 AM
Ngiyabonga ngokuphendula - angiqiniseki ukuthi ngiyavuma, noma kunjalo. Angizange ngithuthukise ngaphambi kwesikhathi… empeleni, ngithole indlela engcono yokuthola konke ukusebenza engikudingayo ngaphandle kwesidingo sokwenza izinguquko ezingeziwe. Encwadini yami, lokho kufanele kube yilokho okubhekiswe kubo bonke onjiniyela.
Ngasho futhi ukuthi ayengakwenza kuthinta ukusebenza. Angikhathazanga ngokuhlola noma ukuzama ngoba bekungadingeki kunikezwe indlela engisebenzise ngayo i-plugin. Ngiphinde futhi - ngathola ukusebenza okungu-100% engikudingayo ngaphandle kokwenza ukujoyina noma ukufaka izinkomba, njll. Lesi yisixazululo esifanele encwadini yami.
Ngiyavumelana nawe kwamanye amanothi akho, noma kunjalo. Ngingu-leery wokushicilela kabusha ama-plugins, ngizwa sengathi ngithola ukuvezwa emsebenzini womunye umuntu. Ngikhombe ibhulogi yombhali kulokhu - ngakho-ke mhlawumbe uzokucabangela njengezici zokukhishwa okuzayo.
I-PS: Kukulungisile ukuhlela! 🙂
Jan 5, 2008 ngo-12: 24 PM
@Douglas: Angiqiniseki ukuthi ngiyavuma, noma kunjalo. Angizange ngithuthukise ngaphambi kwesikhathi? Ngiphinde futhi - ngathola ukusebenza okungu-100% engikudingayo ngaphandle kokwenza ukujoyina noma ukufaka izinkomba, njll.
Yebo, ngicabanga ukuthi ngumehluko phakathi komuntu obuka uhlelo kusuka ekupheleleni kobungcweti nobuciko obuqhathaniswa nomuntu osebenza ngokuzama nje ukwenza okuthile (futhi angisho lokho ngokukhohlisa; kwezinye izinhlu zokuposa ngidlala i- indima yendima ngokumelene neyokuqala
Kuyafana nokuthi umcwaningi mabhuku noma ummeli utshela kanjani umnikazi webhizinisi “Angeke ngikwenze lokho”Futhi umnikazi webhizinisi, angagxili kuzo zonke izinzuzo ochwepheshe abazi ukuthi zinamandla * okuzishaya indiva izeluleko zabo ngoba kubukeka njengomzamo omkhulu, futhi ulima phambili. UNkulunkulu uyazi ukuthi bengikade ngingumnikazi webhizinisi esikhathini esedlule futhi ngiye ngalima phambili ngokumelene nazo zonke izeluleko, noma ngabe kuningi engikubhalile kamuva. 🙂
@Douglas: Nginombono wokushicilela kabusha ama-plugins,…
Cha, akusikho lokho ebengikusho. Engangikusho ukuthi njengoba kungumthombo ovulekile unganikela ngoshintsho lwakho kumbhali wokuqala bazolwamukela, futhi ungakwenza ngokuqinile ngokuxhumana nokunikela. Njengamanje ngisebenza njengomxhumanisi wezokumaketha nomphumeleli wewebhusayithi kubashicileli be-niche phrinta nokusetshenziswa Drupal yezobuchwepheshe bewebhu, futhi umphakathi waseDrupal uhlala uthinta ababhali be-plugin (iDrupal ibabiza ngokuthi “amamojula”) futhi inikela ukusiza ukuthuthukisa amamojula amanye.
PS Siyabonga ngokulungiswa kokuhlela.
Jan 5, 2008 ngo-1: 37 PM
Amaphuzu amahle, Mike!
Ngingahle ngicabange nge-plugin ukwengeza leyo nketho yokuthi "Khombisa okuthunyelwe kuphela ngaphambi kokubonisiwe kweposi". Ngicabanga ukuthi inketho yesibili iphathelene kakhulu nebhulogi yami, kepha ngizohlola futhi ngiyibone ukuthi ingaba nentshisekelo kumbhali.
Jan 5, 2008 ngo-6: 10 PM
@Douglas: Ngicabanga ukuthi inketho yesibili iphathelene nokuphathelene nebhulogi yami…
Yebo, ngiyavuma. Kuhle kodwa!
Jan 5, 2008 ku-10: 45 AM
Crud ekufomeni kwamazwana angaphambilini! Ngifisa sengathi ngabe unakho ukubuka kuqala ukuphawula! '-)
Jan 31, 2008 ngo-2: 43 PM
UDoug - Kungenzeka ngilahlekelwe okuthile lapha. Kubukeka sengathi
akuvimbi okuthunyelwe okwenziwe ngemuva kwalokhu okuthunyelwe ukuthi kungafakwa, kangangoba kuvimbela ukufakwa kokuthunyelwe okungenzeka ukuthi uzibekele kona kushicilelwe ngokuzayo.
Ngiyethemba okunengqondo nokubonga ngebhulogi enhle.
Jan 31, 2008 ngo-3: 56 PM
Lokho ukuthola okuhle! ukuthi ngiqinisekile ukuthi wonke umuntu (obhala kusengaphambili) uzokuthokozela.
Ngizovuselela umbuzo eposini.
Feb 2, 2008 ngo-8: 40 PM
@Mike: Hhayi-ke, ngicabanga ukuthi umehluko phakathi komuntu obuka uhlelo kusuka ekupheleleni kobungcweti nobungcweti kuqhathaniswa nomuntu osebenza ngokuzama ukuzama ukwenza okuthile
Umehluko othakazelisayo. Yize kungaba kuhle ukuthi konke kusebenze ngokusemandleni kakhulu, ezimweni eziningi okubonakala kungenakwenzeka. Ngilwela ukuthola ibhalansi ezinhlelweni zami phakathi kokuthi ngingathanda kanjani okuthile ukuthi kusebenze nokuthi kungathatha imali engakanani $ noma isikhathi ukukuthola lapho.
Ngilwela ukwenza ubuncane obudingekayo ukufeza inhloso engizama ukuyifeza. Ukuchitha isikhathi esithe xaxa bekungeke kubize kahle.
Ngamafuphi, ngaphandle kokuthi lokho kulahleka kokusebenza kahle kwakubonakala kubhulogi yami angizange ngisebenzise isikhathi esengeziwe, Uma kubonakala kunalokho enginganquma ukuthi isikhathi esingeziwe sizowufanele yini umphumela. Ukuphelela akusona isisombululo esihle ngaso sonke isikhathi.
Feb 3, 2008 ngo-4: 04 PM
@Dwayne: Ngilwela ukwenza okuncane okudingekayo ukufeza inhloso engizama ukuyifeza. Ukuchitha isikhathi esithe xaxa bekungeke kubize kahle.
Vele uma ukwenza okuncane njalo kusho ukuthi awufundi amasu angcono okwenza ukuthi uphinde ubuncane kaningi ngokuzayo kunokukuvumela ukukugwema, khona-ke wenze impumelelo engeyona. Yebo, imisebenzi eminingi ayidingi mzamo owengeziwe kepha ngibonile abantu abaningi bethatha izinqamuleli ezinjengalezi esikhathini esedlule futhi bebengabantu abakhiqiza kancane futhi / noma abangaphansi kokudala inani ebengibazi (eminye yayo ngeshwa ngabasebenzi bami , yingakho ngikubonile impela ukungasebenzi kwabo.)
@Dwayne: Ngamafuphi, ngaphandle kokuthi ukulahleka kokusebenza kahle bekubonakala kubhulogi lami bengingeke ngisebenzise leso sikhathi esengeziwe, Uma kubonakala kunokuthi nginqume ukuthi isikhathi esengeziwe sizowuthola yini umphumela. Ukuphelela akusona isisombululo esihle ngaso sonke isikhathi.
Ngicabanga ukuthi ulahlekelwe amaphuzu ami. Okokuqala bengithi uDoug ubelungiselela ukusebenza kahle okungabonakali, hhayi mina, kepha okubaluleke kakhulu uma uzosebenzisa i-hack engadala izingqinamba zokulondolozwa kwesikhathi esizayo ngenxa yobuhle ungayishicileli ukuze isetshenziswe abanye ngaphandle kokuzitshela uhlobo lwezinkinga zokulondolozwa okungazibangela zona ngokuhamba kwesikhathi.
Okuxakayo ngokuphawula kwakho ukuthi ukuthatha umzila osheshayo futhi olula kuvamise ukugcina kukulahlekisela isikhathi esithe xaxa ngokuzayo lapho ufaka isibuyekezo sokuphepha se-WordPress yakho, udedele ukusebenza kwakho okugqekeziwe futhi ukufune kubuye. Manje usune-haystack ngenaliti elahlekile futhi manje udinga ukuthola ukuthi inaliti yayikade ikuphi.
Chitha isikhathi esengeziwe ekusebenzeni? Bah, ngokuvamile akudingeki. Chitha isikhathi esithe xaxa ekugcinweni kwemali? Yebo, kuvame ukuzikhokhela ngokuhamba kwesikhathi.
Ukugoqa, yebo kungokwemvelo yomuntu ukuchitha izexwayiso zezinto ezingakaze zizenzele ubuhlungu. Yizwa ubuhlungu kanye futhi uzoba sethubeni elikhulu lokulalela lezo zixwayiso ezivela kwabanye asebeke babuzwa lobo buhlungu.
Feb 3, 2008 ngo-8: 03 PM
Into eyodwa okufanele ngiyisho; Ngicabanga ukuthi ukugenca kukaDoug kungaba ukwengeza okuhle ku-WordPress, okungenani njengenketho yomsebenzisi. Kubukeka sengathi kuyisilima ukukhawulela okuthunyelwe okuhlobene kuphela kulabo abeza ngaphambili.
FUTHI, ngithanda ukucela uDoug ukuthi abhale mayelana nokuthi okuthunyelwe kwakhe kwansuku zonke kuthunyelwa kanjani kusuka ku del.icio.us; leso kungaba isihloko esithakazelisayo.
Feb 3, 2008 ngo-8: 09 PM
Ngiyavumelana nawe… futhi nansi indlela yokwenza okuthunyelwe kwansuku zonke okuvela ku-Del.icio.us. Jabulela!
Feb 3, 2008 ngo-8: 22 PM
Heh. Kuhle! Ngicabanga ukuthi bekufanele ngabe ngiyitholile kuqala.
I-BTW, ngikuthumele i-imeyili ephathelene nami ukuba se-Indy Feb 16-19 cishe isonto eledlule kepha angizwanga lutho. Uthole? (zizwe ukhululekile ukususa le ngxenye yamazwana ami.)
Ngo-Apr 6, i-2008 ku-11: 54 AM
Okuthunyelwe okuhle, ngizokwenza i-tweak ku-plugin yami ngiyabonga futhi!